ဖော်မလင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖော်မလင် သည် ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်၏။ မက်သနောနှင့် ရေတို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဖော်မလင်အရည်တွင် ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်၏။
၃ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ
ဖော်မလင်ကို သေဆုံးပြီးသောလူများ ပုပ်ပွမှုမရှိစေရန် စိမ်သည့်နေရာတွင်သုံး၏။ ထို့အပြင် ပိုးသတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကုန်လှောင်ရုံများ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှားများ နှိမ်နင်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပိုးချည်၊ ဆိုးဆေး၊ မှန်၊ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည်။
ဖော်မလင်ကို ပဲသွေး၊ ပဲပြား၊ မုန့်ဖတ် အစရှိသည့် စားသောက်ကုန်များတွင် တာရှည်ခံစေရန် တရားမဝင်အသုံးပြုသည်များ ရှိ၏။ ထိုကဲ့သို့သော ဖော်မလင်ပါဝင်သည့် အစားအသောက်များကို စားသောက်မိပါက ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း အစားအသောက်များတွင် ဖော်မလင်ထည့်သွင်းမှုကို စစ်ဆေးကြပ်မတ်လျက် ရှိ၏။
ဖော်မလင်သည် အရည်၊ အစိုင်အခဲ၊ ဓာတ်ငွေ့အသွင်ဆောင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖော်မလင် အငွေ့သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်လာပါက နှခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ အသက်ရှုလေပြွန်များ၊ အဆုတ် စသည်တို့ကို ထိခိုက်နိုင်၏။ အဆုတ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ရင်ကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုရ ခက်ခြင်း၊ မောခြင်း စသည့် ရောဂါဘယများကို ခံစားရနိုင်သည်။
ဖော်မလင် အစိုင်အခဲနှင့် အရည်သည် ပါးစပ်နှင့် အစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်၏။ ဖော်မလင်ကို စားသောက်မိခြင်းကြောင့် အစာအိမ်၊ အူသိမ် စသော အစာလမ်းကြောင်းဆို်င်ရာတို့ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အူသိမ်ရောင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ဗိုက်နာခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း စသည့် ဝေဒနာများကိုလည်း ခံစားရနိုင်သည်။
ထို့ပြင် ဖော်မလင်သည် အရေပြားမှ ဝင်ရောက်လာပါက အရေပြားကို ထိခိုက်ပြီး အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်းပါကလည်း အရေပြားတွင် အလာဂျိများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်၏။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ကိုင်တွယ်မိပါက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်နိုင်၏။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ဖော်မလင်ရှိနေပါက ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ကလီစာများကို ထိခိုက်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်သို့ ပြန်ထွက်လာပါကလည်း ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေ၏။ အထူးသဖြင့် ဖော်မလင်သည် ကလေးငယ်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နိုင်၏။ ဖော်မလင်ပါသည့် အစားအစာများသည် လူကို ထိုခိုက်စေသဖြင့် သတိဖြင့် ရှောင်ရှားသင့်၏။
အသားငါး စသည်တို့တွင် ဖော်မလင်အသုံးပြုထားပါက အကြေးခွံသည် မာ၏။ ညှီနံ့ မရဘဲ ရှိ၏။ ယင်နားမှုလည်း မရှိပေ။ ပင်လယ်စာများတွင် မာပြီး ဖြူနေတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့ ဖော်မလင်သုံးထားသော အသားငါးများသည် ဖော်မလင်အသုံးပြုထားသည့်အတွက် အချိန်ကြာရှည်စွာထားသော်လည်း ပျက်စီးပုပ်သိုးခြင်း မရှိပေ။ မုန့်ဖတ်များတွင် ဖော်မလင်အသုံးပြုထားပါက ပျော့ပျောင့်မှုမရှိပေ။ မုန့်ဖတ်ထဲသို့ ရေနွေးထည့်ပါက ဆေးနံ့ထွက်၏။
ဖော်မလင်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန်အတွက်မူ အသီးများကို မချက်ပြုတ်မီ ရေတွင် တစ်နာရီခန့် စိမ်ပြီးမှ စားသင့်၏။ အသီးအရွက်များ ဖြစ်ပါက ဆားရည်ထဲတွင် ဆယ်မိနစ်ခန့် စိမ်ပြီးမှ ချက်သင့်၏။ အသားငါးများကို ဆားရည်တွင်စိမ်၍ ချက်ပါက ဖော်မလင်ကို ရာနှုန်းပြည့် ဖယ်ရှားနိုင်၏။
ဖော်မလင်သည် ၀.၀၅ ပီပီအမ်ရှိပါက အနံ့ထွက်၏။ ၁. ၃ ပီပီအမ်အထက်ရှိပါက မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတို့ကို ထိခိုက်နိုင်၏။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ အိသဉ္ဇာကျော် (၂၇.၈.၂၀၁၈)။ စားသုံးသူတွေကြားမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတဲ့ ဖော်မလင်အန္တရာယ်။ The Daily Eleven Newspaper။ pp. ၄၊ ၅။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖော်မလင်&oldid=481060" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၃:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။